MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward MPT Viu Offer m - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
A wonder Christmas & New Year Treat
MPT’s Welcome Bonus
Hti Tine Htaw
MPT Special Offer
150% Top up Bonus
Viu မှာ ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းအားလုံးကို MPT နဲ့အတူ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
MPT မိုဘိုင်းဒေတာ အသုံးပြုသူတိုင်း ရုပ်ရှင်နဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းထောင်ပေါင်းများစွာကို Viu မှာ စာရင်းသွင်းခပေးဆာင်ရန်မလိုဘဲ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Running Man, At Eighteen ကဲ့သို့ သော ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများကို နှစ်သက်ပါသလား။ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့အပိုင်းကို မြန်မာ စာတန်းထိုးဖြင့် ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ သို့ မဟုတ် မြန်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ ငယ်ကျွန်၊ လူကြိုက်များတဲ့ မင်္ဂလာရှိတဲ့အရပ် စီးရီး၊ အိန္ဒိယ အက်ရှင်ဇာတ်ကား Super Hit နဲ့ ရုပ်သံစီးရီး များကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ နိုင်ငံ ခြောက်နိုင်ငံရဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ရုပ်သံစီးရီးတွေကို လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Viu Data Pack မှာ ပါဝင်မည့် အစီအစဉ်များ
• ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဖျော်ဖြေရေး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းများ နှင့် TV show များကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
• ထိုင်း၊ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံများမှ အသစ် အသစ်သော
• ကိုရီးယား နောက်ဆုံးထွက် ရုပ်သံစီးရီးများကို ယင်းနိုင်ငံများမှ ထုတ်လွှင့်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းမြန်မာစာတမ်းထိုးဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
• မည်သည့် ဇာတ်လမ်းတွဲကို မဆို Download ဆွဲ၍ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
• Viu မှ ဇာတ်လမ်းများ အားလုံးကို မြန်မာစာတမ်းထိုးဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
• Viu မှာပဲရနိုင်တဲ့ Original shows များကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
Viu တွင် မည်ကဲ့သို့ စတင်ကြည့်နိုင်မလဲ။
အသုံးပြုသူများသည် MPT မိုဘိုင်း ဒေတာအသုံးပြုပြီး Viu app (သို့) www.viu.com သို့ ဝင်ရောက်ပြီး နှစ်သက်ရာ ဇာတ်ကားများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Viu app ကို Google Play store (သို့) MPT Lotaya portal မှာ ဒေါင်းလုတ် ရယူနိုင်င်ပါသည်။
စားရင်းသွင်းခ ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ ဒေတာ အသုံးပြုခကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်အလိုက် (သို့) သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်မှ ဖြတ်တောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီအခွင့်အရေးက အချိန်အကန့်သတ် ရှိတာကြောင့် အမြန်ဆုံးရယူပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ရသတွေကို ခံစားလိုက်ပါ။
ရုပ်ရှင်နဲ့ကြို နှစ်သစ်ကို” Campaign စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
Lucky Data is for internet usage with the cheap data rate without worrying.
MPT brings to you the first ever data pack in Myanmar withacombination of JOOX data.....
More Data Promotion →
MPT ရဲ့ မိုဘိုင်း ဒေတာ အသုံးပြုနေသ၍ အားလုံးကို စာရင်းသွင်းခ ပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒေတာ အသုံးပြုခကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်အလိုက် (သို့) သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်မှ ဖြတ်တောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဗီဒီယိုတွေကို ဘယ်နှစ်ကားပဲကြည့်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ MPT ရဲ MPT ရဲ့ မိုဘိုင်း ဒေတာ အသုံးပြုနေသ၍ တိုက်ရိုက် (သို့) app ထဲသို့ ဒေါင်းပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မရနိုင်ပါ။ MPT ရဲ့ မိုဘိုင်း ဒေတာ နှင့် သာ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၈. Viu app ကို ဖွင့်သော်လည်း ဇာတ်ကား တွေကို ကြည့်လို့ မရဘူး။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
MPT ရဲ့ မိုဘိုင်းဒေတာကို ဖွင့်ထားလား သေချာ စစ်ဆေးပေးပါ။ ဖွင့်ထားသော်လည်း ကြည်လို့ မရပါက app ကို ပိတ်လိုက်ပါ။ android settings ထဲရှိ cache များကို ရှင်းလင်းပြီး restart ပြုလုပ်ပါ။
Data နဲ့ပတ်သက်၍ အဆင်မပြေပါက MPT ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ၁၀၆ ကိုခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
[email protected] ကို အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။